नेविसंघको विधान पारित, दुई महिना म्याद थप ! - नेविसंघको विधान पारित, दुई महिना म्याद थप !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २ मंसिर, 10:19:37 PM
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विधान स्वीकृत गरेसँगै सङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिको समयावधि दुई महीना थप भएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सङ्घको विधानलाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
नेविसङ्घको विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल आजसम्म थियो । विसं २०७३ भदौ २ गते दुईवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय समितिले त्यसयता थप गरिएको तीन महीनाको अवधिमा समेत महाधिवेशन गर्न सकेको थिएन ।
नेविसङ्घको विधानमा दुईवर्षे कार्यकाल र विशेष परिस्थितिमा तीन महीना थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो । काङ्ग्रेस बैठकले तीन महीना थप गर्न सकिने प्रावधानको सट्टा पाँच महीना थप गर्न सकिने प्रावधानसहितको विधानलाई स्वीकृत गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
विधान स्वीकृतसँगै स्वतःविघटनको सङ्घारमा पुगेको नेविसङ्घको कार्यसमितिलाई महाधिवेशन गर्न दुई महीना समयावधि प्राप्त भएको छ । विसं २०२७ मा गठन भएको नेविसङ्घ काङ्ग्रेसको प्रभावशाली भ्रातृ संस्था हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले स्वतन्त्रता सेनानी सोनेलाल पासवान धनुषा, मणिसुन्दर वजियम खोटाङ, भीमराज नौलाखा मोरङ, काङ्ग्रेसका योद्धा तेजप्रसाद उप्रेती धादिङ, कर्णबहादुर राना गुल्मी र धनबहादुर श्रेष्ठ सिन्धुपाल्चोकको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।
२०७५, २ मंसिर, 10:19:37 PM
कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध कांग्रेसले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै
कांग्रेस विधानको मस्यौदा केन्द्रिय समिती बैठकबाट पास !
कांग्रेस महासमिति बैठकमा हात हालाहाल ! प्रवक्ता भन्छन् : “केहि भएको छैन् “
कांग्रेस पदाधिकारीको टुंगो लाग्यो, अरु विषयमा विवाद कायमै